प्रचण्ड-नेपाल मिल्दा अल्पमतमा ओली – HostKhabar ::
प्रचण्ड-नेपाल मिल्दा अल्पमतमा ओली
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले चौतर्फी चेपुवामा परेका छन्। पार्टीभित्र मात्रै होइन संसदमा समेत उनको चर्को आलोचना हुन थालेको छ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच गठबन्धन भएपछि पार्टीभित्रको समिकरणमा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अझ प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली सचिवालय र स्थायी कमिटी दुवैमा अल्पमतमा परेका छन्।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा लाने कि नलाने भन्ने विषय नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै गएको छ। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालहरु एकै ठाउँमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओली त्यसको विपक्षमा छन्। यस्तै, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका गोकुल बाँस्कोटा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप रक्षात्मक बन्ने अवस्थामै पुगेका छन्।
नेकपाको सचिवालय बैठकले बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसको केही घण्टापछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालको निर्णय नमान्ने र अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई नै फेरि राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि नाम सिफारिस गर्ने बताएका थिए।
सचिवालयको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विषेशाधिकार प्रयोग गर्ने बताएपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ। ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर सचिवालयको निर्णय मान्न आफू बाध्य नहुने बताइसकेका छन्। त्यसयता नेकपाको आन्तरिक राजनीति तरल बन्न पुगेको छ।
शुक्रबारमात्रै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा ओली इतर समूहका नेताहरुबीच छलफल भएको छ। छलफल सकिएलगत्तै चितवन पुगेका प्रचण्डले सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताएका छन्।
उनले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई बजेट भाषणसम्मका लागि निरन्तरता दिइने बताए। ओली पक्ष इतरका सबै नेताहरुले सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि बाध्यकारी भएको बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न त सक्छन्। तर, पार्टीको निर्णय लत्याउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज अवस्था छैन। किनकि आन्तरिक समिकरण प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन्। सचिवालयमा मात्रै होइन ओली स्थायी कमिटीभित्रै अल्पमतमा परेका छन्।
९ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीका पक्षमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलमात्रै देखिएका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल, नारायणकाजी श्रेष्ठ ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्।
यस्तै, स्थायी कमिटीको समिकरणलाई हेर्ने हो भने ओलीको अवस्था झन् दयनीय देखिन्छ। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीका पक्षमा ९ जनामा मात्रै छन्। प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र बामदेव मिल्दा ३६ जना स्थायी कमिटी सदस्य उनीहरुसँग हुनेछन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पार्टीभित्र अहिले निकै प्रतिकुल अवस्थामा सिर्जना भएको छ। संसदमा आफ्नै र विपक्षी सांसदको तिखो प्रहार प्रधानमन्त्री ओलीले खेप्नु परिरहेको छ। जनस्तरमा समेत उनी नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको निर्णयलाई लत्याएर मन्त्रिपरिषदको विषेधिकार प्रयोग गर्न ओलीलाई त्यति सहज छैन।
यस्तो छ नेकपाभित्रको समिकरण
१. ओली गुट
– सुवास नेम्वाङ
– शंकर पोख्रेल
– छविलाल विश्वकर्मा
– प्रदीपकुमार ज्ञवाली
– पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
– विष्णु रिमाल
२. ‘प्रचण्ड’ गुट
– हरिबोल गजुरेल
– मणि थापा
– गिरिराजमणि पोखरेल
– चक्रपाणि खनाल
– जनार्दन शर्मा
– टोपबहादुर रायमाझी
– पम्फा भुसाल
– देवप्रसाद गुरुङ
– देवेन्द्र पौडेल
– वर्षमान पुन
– लीलामणि पोखरेल
– लेखराज भट्ट
– शक्तिबहादुर बस्नेत
– गणेश साह
– अष्टलक्ष्मी शाक्य
– सुरेन्द्र पाण्डे
– बेदुराम भुसाल
– भीम रावल
– भीम आचार्य
– गोकर्ण विष्ट
– युवराज ज्ञवाली
– रघुजी पन्त
– किरण गुरुङ
काठमाण्डौं प्रेस डटकम